ရေနံဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
သင့်ပိုက်ဆံအား ဘယ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲမသိပါက၊ ရေနံဈေးကွက်သည် သင့်အတွက် ကြီးမားသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေနံသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အာရုံကိုဖမ်းစားထားသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတာနှင့် ရေနံဈေးကွက်တွင် သင့်ဝင်ငွေကို ဘယ်လိုအရှိန်မြှင့်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြသွားပါမည်။
ရေနံဈေးကွက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ မှော်ဆန်တဲ့ အက္ခရာ ၃လုံး CFDကို မြင်ရပါလိမ့်မည်။
CFDသည် ခြားနားချက်အတွက် စာချုပ်၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ရေနံကို စည်အဖြစ်ရေတွက်မှန်း ကျွန်တော်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ရေနံဈေးကွက်အတွင်း ဝင်သွားသည့်အခါ ကွန်တိန်နာထဲတွင် တကယ့်ရေနံအစစ်ကို ရမည်မဟုတ်ကြောင်း သင်နားလည်ထားသင့်သည်။ ဒါပေမဲ့ ဘာရမှာလဲ? သဘောသဘာဝမှာ အကျိုးအမြတ်တန်ဖိုးကို ခန့်မှန်းရန်နှင့် မှန်ကန်သော ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွင် အောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဈေးကွက်ထဲရောက်လာသည့်အခါ၊ သင်သည်ငွေဝင်ပေမဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို မဝယ်ယူပါ။
CFD ဈေးနှုန်းဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်သလဲ? ဈေးနှုန်းသည် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ယေဘုယျမှည့်ခေါ်သော ကြိုရောင်း၊ ကြိုဝယ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအစုရှယ်ယာများနှင့် နယူးယောက်ကုန်သည်အိတ်ချိန်းများ၏ ဈေးနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Brent နှင့် WTI
ရေနံဈေးကွက်၏ တစ်ခုတည်းသောဇယားကို ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်သိပါသလား? သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် အဓိက ရေနံရည်ညွှန်းမှတ်နှစ်ခုရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ Brent နှင့် WTI>ဖြစ်သည်။
Brent သည် ဥရောပနှင့် အာရှဈေးကွက်အတွက် စံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီရည်ညွှန်းအမှတ်သည် Brent, Ekofisk, Oseberg, နှင့် Forties ၏ နော်ဝိန်းဂျီးယမ်းနှင့် စကော့တလန် ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း လုပ်ကွက်တွင် ထုတ်လုပ်သည့် ရေနံအမှတ်များ ၁၅ခုထက်မက ပါဝင်ပါသည်။
WTIသည် အနောက်တိုင်းစက်ဝိုင်းခြမ်း၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ၎င်းအား အမေရိကန် ရေနံနယ်ပယ်များ၊ အထူးသဖြင့် တက္ကဆက်၊ လူဝစ်စီယားနားနှင့် မြောက်ဒါကိုတာတို့တွင် ထုတ်လုပ်သည်။
ဤရည်ညွှန်းမှတ်များကြားတွင် ကွာခြားချက်နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ တည်နေရာဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယမှာ ဓာတုဗေဒဖော်မြူလာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့သည် ဈေးနှုန်းကွာခြားခြင်းဖြစ်သည်။ WTI သည် Brent ထက်ဈေးပိုနည်းသည်။ သို့သော် ယင်းတို့၏ဇယားကိုကြည့်ပါက၊ ယင်းတို့ရွေ့လျှားမှုတွင် သိသိသာသာကွဲပြားမှု တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။
ရေနံရည်ညွှန်း(စံ)အမှတ်များကြားတွင် ကွာခြားမှုများရှိသော်လည်း၊ ယင်းတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည့် အကြောင်းရင်းများတွင် ကွဲပြားမှုမရှိပါ။
ဈေးကွက်တိုင်းကို သက်ရောက်သည့်အကြောင်းရင်းမှာ ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုကိုသာ မှတ်ထားပါ: ရောင်းလိုအားကျဆင်းသည့်အခါ - ဈေးတက်ပြီး၊ ရောင်းလိုအားတက်သည့်အခါ - ဈေးကျပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဝယ်လိုအားကျဆင်းသည့်အခါ - ဈေးကျပြီး၊ ဝယ်လိုအားတက်သည့်အခါ - ဈေးတက်ပါသည်။
ဝယ်လိုအား/ရောင်းလိုအား ဘာလို့ပြောင်းလဲနိုင်တာလဲ? ဝယ်လိုအား ကျဆင်းလာမှုသည် အကြီးဆုံးရေနံတင်သွင်းသူများ၏ စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ်လာမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရောင်းလိုအား ကျဆင်းမှုသည် ပဋိပက္ခများ၊ ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ရေနံတူးဖော် တူးစင်နှင့်ပတ်သတ်သည့် ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ရေးမြင့်တက်လာမှုသည် ရေနံတင်ပို့သူများ ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။
ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားသည် အဓိကအခြေခံ အကြောင်းရင်းများဖြစ်ပြီး၊ အခြားအရာများသည် ယင်းတို့အပေါ်တွင် အခြေခံနေပါသည်။
အကြီးဆုံး ရေနံထုတ်လုပ်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မသေချာခြင်းများ၊ ပဋိပက္ခများ၊ ပိတ်ဆို့မှုများသည် ရေနံဈေးနှုန်းအား အမြဲတမ်း အသေအချာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သဘောကတော့ ရှင်းပါတယ်: ပဋိပက္ခများသည် ထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တောက်မှုကို ဦးတည်စေပြီး၊ ထောက်ပံ့ရေးကျဆင်းမှုသည် ရေနံဈေးနှုန်းကို အရှိန်တက်စေသည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကတော့ သတင်းများနောက်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုက်နေရန်ဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်စိတ်ခံစားမှုသည် နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များထံမှ အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ရေနံဈေးကွက်၏ အင်္ဂါရပ်မှာ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲသည် အချက်အလက်ပေါ်မဟုတ်ဘဲ၊ သတင်းပေါ်မှာ မူတည်ပါသည်။ ဥပမာ၊ အနာဂတ်ထောက်ပံ့ရေး (supply)နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြဿများအပေါ် သတင်းများထွက်လာလာချင်း၊ ဈေးနှုန်းချက်တင်း တက်လာသည်။ ဈေးကွက်တောင်မှ ထောက်ပံ့ရေးကျဆင်းမှုအပေါ် အချက်အလက်အတည်ပြုချက်မလိုပါဘူး။
ရေနံဈေးကွက်သည် ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်၏ သက်ရောက်မှုခံရသည့်အတွက်၊ ရေနံထုတ်လုပ်သူများသည် သူတို့ဆန္ဒအလျှောက်အသုံးပြုကြသည်။ရေနံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက၊ ဒီအချက်ကို အမြဲမှတ်ထားသင့်ပါသည်။ ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်နောက်လိုက်ခြင်းသည် ရေနံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဗျူဟာဖြစ်သည်။
သတင်းများ။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားခဲ့သလို၊ ဈေးနငန်းသည် ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်အပေါ်မူတည်သည်။ ဤစိတ်ခံစားချက်ကို ဖမ်းမိ၇န်၊ သတင်းကို ဖတ်ရန်၊ အမေရိကန်၊ OPEC နှင့် ရုရှားကဲ့သို့ ၎င်း၏ non-OPEC မဟာမိတ်များ၏ မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
အစီရင်ခံစာ။ ဝယ်လိုအား/ရောင်းလိုအား ပြဿနာအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်၊ အမေရိကန် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာ သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားအုပ်ချုပ်ရေး၏ အစီရင်ခံစာကို လိုက်နာသင့်သည်။ ဤနေရာတွင် အပတ်တိုင်းထုတ်ဝေသည့် ရေနံစိမ်းသိုလှောင်မှုဒေတာ(စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်ကို ဆန်းစစ်ပါ)နှင့်၊ ၎င်းဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားပေါ်မတူညီသောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အားလုံးကို ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ဒါပေါ့၊ OPECအကြောင်းလဲ အမှတ်ထားပါ။ အဖွဲ့အစည်းမှ အစီရင်ခံစာများကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။
ရေနံဈေးကွက်မှ သင့်အားမည်သည့်အခွင့်အရေးများ ပေးသနည်း
ဈေးလှုတ်ခတ်မှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကြီးမားသည့် နေ့စဉ်ရွေ့လျှားမှုနှင့်အတူ၊ သင့်ဝင်ငွေအရှိန်မြှင့်တင်ရန် ကြီးမားသည့်အခွင့်အရေးများကို ဈေးကွက်မှပေးပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ တချိန်တည်းမှာပင်၊ မြင့်မားသော ဈေးကွက်လှုတ်ခတ်မှုသည် အရှုံးများဖြစ်စေတတ်ကြောင်း အမှတ်ရသင့်ပါသည်။ မကောင်းသောရလဒ်များကို ရှောင်ရှားရန်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းအကြောင်းကို မှတ်ထားသင့်ပါသည်။ ဘာထပ်ရှိသေးလဲ၊ ဈေးကွက်သည် လောင်းကစားသမားများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ရေနံဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာ သင်ဘယ်တော့မှ ပျင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းများ၊ အစီရင်ခံစာများသည် နေ့စဉ်လာပြီး၊ ဈေးနှုန်းသည် အထက်၊အောက် ခုန်နေပါသည်။ သင်သည် ဂိမ်းများ၏လွှမ်းမိုးခြင်းခံနေရပါက၊ ရေနံဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် သေချာပေါက်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
• Brent နှင့် WTI သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရောင်းဝယ်ဆုံး ရည်ညွှန်းမှတ်များထဲမှ ဖြစ်ကြသည်။
• ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားသည် ဈေးကွက်လားရာကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည့် အခြေခံအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။
• အမေရိကန်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် OPEC ထံမှ အစီရင်ခံစာများအကြောင်း အမှတ်ရပါ။
• ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်နောက်လိုက်ခြင်းသည် ကြီးမားသည့်အကျိုးမြတ်အတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
• မြင့်မားသော ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုတွင် ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ လေ့လာပါ။